Ra’iisal wasaaraha Britain Boris Johnson Oo Ka Hadlay Masiibada Suuqa Waaheen Ee Somaliland - #1Araweelo News Network
Ra’iisal wasaaraha Britain Boris Johnson Oo Ka Hadlay Masiibada Suuqa Waaheen Ee Somaliland
Britain waxay banaqaaday Doorka ay ka qaadanay masiibada suuqa gubtay ee Waaheen
London(ANN)-Ra’iisal wasaaraha Britain, Boris Johnson ayaa ka hadlay masiibada dabka Suuqa Waaheen ee caadimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa.
Ra’iisal wasaare Johnson iyo mas’uuliyiin ka tirsan hoggaanka sare ee dawladda Britain, ayaa si murruga leh uga hadlay masiibada dabkaa oo galaaftay hanti gaadhysa balaayiin oo ood iyo noolba leh.
Ra’iisal-wasaare Boris Johnson iyo masuuliyiinta kale ee Britain, waxay masiibadaa kaga hdleen Farriimo ay ku qoreen baraha bulshada ee Twitter, waxayna ku sheegeen inay ka xun yihiin dhibaatada dhacday iyo saamaynta dhaqaale ee ay keeni karto.
Masuuliyiinta Britain, waxay sheegeen inay murrugada la qaybsanayaan bulshada Jamhuuriyadda Somaliland, isla markanaa kala shaqayn doonaan dawladda gurmadka masiibadaa.
“Waxaan aad uga xumahay in aan aragno dhibaatada ka dhalatay dabka Hargeysa ka kacay ee burburka intaa le’eg gaadhsiiyey suuqa furan ee halbowlaha dhaqaalaha magaalada, kaasoo saameeyey ganacsiyo badan oo yar yar iyo qoys badan.” Ayuu ku yidhi, qoraalka ra’iisal wasaare Johnson.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in Magaaladaadu mar kale ayay kici doonto, “UK waxay samayn doontaa wixii aan kari karno si aan u taageerno dadaalka dib u dhiska ee Somaliland” ayuu yidhi Raysal Wasaare Boris Johnson.